#Twitter mahomby #tetezana miaraka amin'ny #Hashtags | Martech Zone
#Twitter mahomby #Marketing amin'ny #Hashtags
Alahady, Jolay 26, 2009 Alakamisy 20, 2014 Douglas Karr
Tsia, tsy iray amin'ireo manelingelina izany Makà mpanaraka bebe kokoa fanentanana hampisondrotra ny fanarahana anao amin'ny Twitter miaraka amin'ireo mpanaraka tsy misy dikany. Ity no fomba hanatsarana ny feonao amin'ny Twitter amin'ny fomba mahomby mba hahitan'ny mpihaino tsy manara-dia anao ny bitsikao.
Ny valiny dia antsoina hoe tenifototra. Misy olona sy programa marobe mitady Twitter amin'izao fotoana izao ho an'ny vaovao ara-potoana sy hetsika tadiavina tenifototra.
Ny tenirohy dia ny marika pound # arahana tag izay manazava ny lohahevitra soratanao. Raha manoratra momba ny toekarena aho dia mety manoratra ao amin'ny bitsiko ny # ekonomia. Raha manoratra momba an'i Indianapolis aho dia mety #indy. Raha mampiasa Twitter ho an'ny orinasa ianao dia ilaina ny fampiasana tenifototra mahomby.
Ity misy ohatra iray. Rehefa namoaka ny Rotator amin'ny sary WordPress, azontsika atao ny nibitsika tsotra izao hoe navotsotra izy ity ary tokony ho namaky momba izany ireo mpanaraka antsika.
Fa kosa, nanampy tenifototra izahay #wordpress ary #plugin amin'ny hafatra:
Apetraho amin'ny Image Rotator ny fanavaozana farany anay #WordPress #Plugin! Misintona mihoatra ny 78,000! http://t.co/vyDuwSjGsa
- Teknolojia marketing (@martech_zone) Septambra 2, 2014
Avy hatrany dia nakarina ilay tweet ary naverina navoakan'ny kaonty maro manara-maso ireo tenifototra ireo, ary nanjary fametrahana an-jatony maro ny plugin. Oh, ary ity koa dia fomba tsara iray hakana mpanaraka mifandraika! 🙂
Ity misy infographic tsara avy amin'i Leap momba ny tantara sy ny fampiasana ny tenifototra amin'ny media sosialy.
Tags: chris messinatenifototra voalohanyhashtagtenifototra ho an'ny marketingmarketing amin'ny tenifototraTwittertenifototra twitterinona ny tenifototra
WordPress: Ampio fampahalalana momba ny mpanoratra ao amin'ny Sidebar
Votoatiny mitovy amin'ny fandefasana samihafa
Aug 8, 2009 amin'ny 1: 50 AM
Faly mahita fa afaka manampy amin'ny fandefasana fivezivezena vitsivitsy izahay ary manaparitaka ny fitiavana ho an'i Douglas kely, ny fandefasana ny tena lahatsoratrao amin'ny tranokala WPscoop dia hanampy anao bebe kokoa na dia 🙂
Sep 14, 2009 amin'ny 7: 25 AM
mamaky ny e-book anao aho, dingana 25 ny fitorahana bilaogy ho an'ny SEO ary nanontany tena foana aho hoe inona izany tenifototra izany. 6 volana mahery aho no tao amin'ny twitter ary mbola tsy hitako ireo zavatra ireo. fantatro izao! ary fantatro izao ny anaran'izy ireo! Misaotra anao!
Jun 3, 2011 ao amin'ny 11: 01 PM
Mahaliana, misaotra an'ny loha!
9 Mey 2012 tamin'ny 6:07 hariva
Lahatsoratra mahafinaritra Douglas,
Misy tranokala ahafahako mahita ny lisitry ny tenifototra mifandraika amin'ny haitao malaza? Mba soso-kevitra azafady.
10 Feb 2012 tamin'ny 2:25 maraina
Salama @ yahoo-RTSVY4AEAMGXMRAIJHGU6V73HQ: ny tranokala iray fantatro dia ny http://hashtags.org - manara-maso manome tenifototra amin'ireo tenifototra malaza indrindra izy ireo.
mividy mpanaraka ny twitter
13 Jun 2012 amin'ny 4:48 AM
tsara manoratra douglas .. fanazavana tsara momba ny tenifototra